Systemd inokonzera kusagadzikana pamaseva nekutenda kune bug mune dns_packet_new | Linux Vakapindwa muropa
Kwemazuva mashoma apfuura, system uye server manejimendi vanga vakanyanya kushushikana kupfuura zvakajairwa. Chikonzero cheichi chinonzi Systemd, chishandiso chine zvakawanda zvakagoverwa uye izvo zvakakonzera rakakura gomba rekuchengetedza mumaseva.
Dambudziko riri mukati iyo dns_packet_new package, pasuru inochengeta iyo dns mukati meSystemd iyo yakadyara kusawirirana uye kunetsekana pakati pemaseva mazhinji.
Iwo manejimendi edns neSystemd akonzera gomba rekuchengetedza mumaseva
Bhugi iri muSystemd inokonzerwa neiyo dns_packet_new package inogadzira diki diki yekurangarira buffer izvo zvinogona kukundwa zviri nyore uye mushure meizvozvo anorwisa anogona kutora mukana nazvo kutora kutonga kwemuchina. Iri igomba rakakomba rekuchengetedza uye rinokanganisa zvese zvinogoverwa zvine Systemd, kunze kwekunge vaine vhezheni yakaenzana kana kana yapfuura pane Systemd 233, izvo zvakanyatso kumutsa kutya mune vamwe. Inofanira kuyeukwa kuti Gnu / Linux ndiyo inoshandiswa zvakanyanya mukati memaseva, ichitopfuura 90% yemakomputa ane ino sisitimu inoshanda.
Parizvino, migove mizhinji iri kutumira mapakeji ayo anogadzirisa kusagadzikana uku, saka zvinoita sekunge kupera kwevhiki rino, iyo mazhinji emaseva anenge asiri ekukuvara, asi mune dzimwe nguva chaipo zvichave zvakakodzera kumirira nguva shomana, zvine njodzi inotevera.
Systemd yakaunza gakava kune iyo Gnu / Linux nyika kwemwedzi. Kutanga nekuuya uye kushandiswa kwesisitimu kune kumwe kugovera uye ikozvino nemakomba ekuchengetedza. Chero zvazvingaitika, ichokwadi kuti kugoverwa kwakawanda kunoenderera mberi nesisitimu iyi uye zvinongogadzirisa zvipembenene zvinoonekwa. Asi kune dzimwewo nzira dzisingashandise systemd, kana iwe uchifunga nezvekuchinja kugovera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Systemd inokonzera kusagadzikana pamaseva nekutenda kune bug mune dns_packet_new
Devuan ndiko kuponeswa kwako.
izvi hazvisi zvitsva!
systemd izere nemabhureki, iyi haisi iyo yega.
yakave nekushingairira uye zvisina yambiro yambiro nezve mhedzisiro yekuve yakaoma meta-pasuru iyo inotonga ingangoita zvese, senge systemd.
asi vanhu vanoda kumhanya muchimanje pasina kuyera mhedzisiro yacho
Ichokwadi ndechekuti ini ndinofarira echinyakare starter scrypts, uye zvitsva zvinouya zvishoma nezvishoma pane pasina kukurumidza. pasina kutyora chirevo cheUnix (ita chinhu chimwe uye chiite nemazvo)
ndosaka ndichishandisa Slackware.
Asi linux haisi unix.